Kheladi - इङ्लिस प्रिमियर लिगको उपाधिका लागि प्ले अफ होला ?
इङ्लिस प्रिमियर लिगको उपाधिका लागि प्ले अफ होला ?
इङ्लिस प्रिमियर लिगमा यस्तो पहिले कहिल्यै भएको थिएन, तर उपाधि छिनोफानोका लागि दुई खेलमात्र बाँकी रहँदा म्यानचेस्टर सिटी र लिभरपुलबीच तीन अंकको दूरी छ । यसले यस सिजनको समापनपछि प्रिमियर लिगको उपाधिका लागि अर्को एक खेलबाट निर्णय हुन सक्ने सम्भावनालाई कायम राखेको छ । कस्तो गज्जबको सम्भावना ।
प्रिमियर लिगमा प्ले अफ हुनको लागि आवश्यक विशेष नतिजामा पुग्नुअघि, अंक तालिकाको लागि प्रिमियर लिगको नियमहरू यस्ता छन् ।
यदि दुई टोलीको अंक बराबर भएमा, गोलअन्तर निर्णायक बन्नेछ ।
यदि गोलअन्तर बराबर भएमा, जुन टिमले धेरै गोल गरेको छ उही माथि उक्लिने छ ।
यदि दुई क्लबबीच अझै पनि कुनै फरक छैन भने, उक्त सिजन लिगमा दुई टोलीबीचको हेड टु हेडमा कम अंक जोड्ने टिम पछाडी झर्नेछ ।
यदि हेड टु हेडमा पनि दुवै टोलीको रेकर्ड उस्तै छ भने, जुन क्लबले अवे खेलमा धेरै गोल गरेको छ त्यही क्लब माथि उक्लिने छ ।
यदि माथिका कुनै पनि मापदण्डले दुई टिमलाई छुट्याउन सक्दैन भने, उक्त दुई टोलीले एक तटस्थ मैदानमा प्रिमियर लिग कमिटिले निर्धारण गरेको समय र स्थानमा खेल खेल्नु पर्नेछ ।
प्रिमियर लिगको उपाधिका छिनोफानोका लागि प्लेअफ हुन के हुनुपर्छ ?
सिटी र लिभरपुलले यस सिजन प्रिमियर लिगको दुवै खेलमा २–२ को बराबरी खेलेपछि लिग उपाधिको हेड डु हेडमा भने प्लेअफ हुनसक्ने अकल्पनीय सम्भावनालाई यसले कायम राखेको छ ।
इङ्लिस च्याम्पियनको निर्धारणका लागि प्ले अफमा पुग्न पक्कै पनि नतिजाहरू पनि त्यहीअनुरुपको निस्किन आवश्यक हुन्छ ।
लिभरपुलले साउथह्याम्पटनविरुद्ध खेल्दैछ, जसले मार्चयता तीन खेलमा चार गोल बेहोरेको छ । र, आइतवार वेस्ट ह्यामको यात्राअघि सिटीको सेन्टर ब्याकमा चोटहरू थुप्रिएको छ भन्ने कुरा निकै कमलाई मात्र थाहा छ ।
कसरी सम्भव छ प्ले अफ ?
प्रिमियर लिग उपाधि छिनोफानोको लागि अब दुई खेलमात्र बाँकी छन् । जसमा दुवै टोलीले केही विशेष नतिजाको आत्मसाथ गरेमात्र उपाधिका लागि प्ले अफ हुने सम्भावना छ ।
आइतबार सिटी वेस्ट ह्यामसँग २–० हार्यो भने मंगलबार लिभरपुलले साउथह्याम्टनमाथि ४–० को जित निकाल्नु पर्नेछ ।
यस्तै, सिजनको अन्तिम दिन सिटीले स्टेभेन जेरार्डको एस्टोन भिल्लालाई २–१ ले हराउँदा लिभरपुलले वुल्भ्सलाई २–० ले पराजित गर्नु पर्नेछ ।
प्लेअफ कहाँ हुनेछ ?
प्लेअफ हुने भए उक्त खेल फुटबलको घर वेम्बलीमा हुने अनुमान गरिएको छ । तर, प्रिमियर लिगको दौड त्यो नजितासम्म पुग्न सक्दैन । सायद, कसैले पनि प्रिमियर लिगका ३८ खेलपछि पनि विभाजित हुन नसक्ने नतिजाको बारेमा सोचेका छैनन् ।
तटस्थ स्थानको बारेमा प्रिमियर लिगको नियममा उल्लेख भएजस्तै यसको बारेमा लिग कमिटिले निर्णय गर्नेछ ।
दुवै टोली इङ्ल्यान्डको उत्तर–पश्चिममा आधारित भएकाले प्रिमियर लिगको उपाधि छिनोफानोका लागि हुने प्ले अफ म्यानचेस्टर युनाइटेडको मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा हुन सक्ने सम्भावना पनि देखाउँछ ।
नतिजा प्ले अफसम्म पुगे यो कहिले हुन्छ ?
इङ्लिस प्रिमियर लिगको समापनपछि उपलब्ध हुने पहिलो सप्ताहन्त मे २८–२९ हो । तर, यस समय लिभरपुल उपलब्ध हुन नसक्ने देखिन्छ । कारण, यसै बेला युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फाइनलको लागि लिभरपुलले स्पेनिस क्लब रियाल मड्रिडविरुद्ध खेल्नेछ ।
यसले दुवै क्लबहरूको अनुकुलता अनुरुप सम्भाव्य प्ले अफ जुनको पहिलो सप्ताहन्तमा हुन सक्ने देखिन्छ । तर, यो सम्भावना पनि तोकिएको तटस्थ मैदानको उपलब्ध खाली समयमा निर्भर रहनेछ ।
पोग्बा भित्र्याउने दौडमा थपियो बायर्न
पञ्जावले बैंगलोरलाई हरायो